Inweta Nrọ Europe: 5 Ga-Gị Mba | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Iceland > Inweta Nrọ Europe: 5 Ga-Gị Mba
(Emelitere ikpeazụ On: 15/01/2022)
Europe bụ ihe na-eduga na kọntaktị na vibrant, ibi, na fun-jupụta oge a na obodo. Enwere otutu ihe owuwu ụlọ, ngosi ihe mgbe ochie, na ụlọ nri na mba Europe ọ bụla ị ga-eche. Ndụ abalị na nri n'akụkụ gafee kọntinent abughi nke abụọ. Anụmanụ na ihe ndị sitere n'okike na kọntinent ahụ na-adọrọ mmasị ma dịkwa mfe nnweta. Ma n'ihi ihe EU na netwọk okporo ụzọ dị elu gburugburu kọntinent ahụ, Ọ dị mfe ndị na-aga n'okporo ụzọ ịchọpụta kọntinent ahụ dum n'otu nza. Iji nweta nrọ nke Europe ị nwere ike iji ụgbọ ala mgbazinye ma ọ bụ ụgbọ njem ọha.
Okporo ígwè iga bụ ihe kasị environmentally friendly ụzọ njem. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Chekwa ụgbọ oloko, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
You chọrọ onye gbara ọsọ ndụ (Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ofesi) Drivegbọala Na Europe?
Ọfọn, mba ụfọdụ dịka requiretali chọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala si mba ọzọ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ofesi dị ka ihe akaebe nke ịkwa nkà. Ọ dị mma iweta akwụkwọ ikike ọbụlagodi na mba ndị na-anaghị achọ ya n'ihi na ịnwere ike ịchọrọ ya iji kwenye ndị ọrụ mgbazinye ụgbọ ala mpaghara na ndị uwe ojii na-ahụ maka okporo ụzọ na ị bụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala. Ọzọkwa, tupu na-aga, lelee CDC iji hụ na ebe ndị anyị na-atụle ebe a anaghị arịa ọrịa ahụ nnukwu. Ye emi ke ekikere, nke a bụ ndepụta nke 5 Ga-eleta mba ndị dị na Europe.
Ndị mmadụ garala Santorini kwenyere na obodo ahụ bụ ebe kachasị nwee ịhụnanya na ọ bụghị naanị Europe kamakwa ụwa niile. O zuru oke maka di na nwunye ohuru na-achọ a honiimuunu ebe. Will ga-enwe mmasị na echiche caldera dị ịtụnanya na ọdịda anyanwụ. Nwere ike soro bulie onu, gaa njem njegharị, ma ọ bụ nwee obi iru ala n'ehihie dị n'ụsọ osimiri nke ugwu mgbawa ojii nke obodo ahụ. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya kalama, ị ga-n'anya nlele obodo mmanya tinyere Mediterenian. Santorini bụ alyabụ nọrọ n'ụlọ ụfọdụ n'ime ụlọ ndị kachasị ọnụ ahịa na Gris.
2. Ahụmahụ nke nrọ Europe: Lake Como, Ịtali
Lake Como na-ewu ewu maka ọtụtụ obodo na obodo nta ndị na-adịghị agwụ agwụ, nri dị ụtọ (ọ bụ gị, Pizza Italian?), na mpaghara foto dị ịtụnanya, ha niile jikọtara ha na ọrụ ụgbọ mmiri kwa ụbọchị. Ọ bụrụ n’inwere oge na ụma dọla iji chekwaa, ị nwere ike ịgbazite ụgbọ mmiri ma gbagoo obere obodo Bellagio. N'ụzọ ndị ọzọ, ị nwekwara ike ịga ije ma ọ bụ jiri a igwe eji eme mmanu gas ma nwee ọmarịcha echiche site na onwe gị. Ọnọdụ ihu igwe dị ebe a na-eju anya afọ niile ma n'ihi ọdịbendị agbachiri mpaghara ahụ (enweghi otutu ndi njem nleta), ị nweta ohere zuru oke iji kwụsị ọrụ na ahịhịa nke ndụ gị. Lake Como nwekwara ezigbo ọnọdụ ịhụnanya maka oge ezumike.
Isi obodo Iceland nke Reykjavik bụ otu n’ime obodo kachasị mma na Europe maka ndị njem, n'ihi ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na ị na-akpali mmasị n'akụkọ ihe mere eme, ị ga-ahụ Reykjavik n'anya maka ụlọ ngosi ihe mgbe ochie mara mma ma baa ọgaranya n'etiti ha Viking na-ahụ maka Maritime Museum, na Einar Jonsson Museum, na Ebe A Na-edebe Ihe Ochie. Isi obodo dị iche iche na-adọrọ mmasị gbara isi obodo ahụ gburugburu, na-eme ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mma maka ndị ọbịa ụwa. Ga ahụ ma hụ ọtụtụ tọn ihe ịtụnanya dị na mbara ala tinyere isi ala, nsụda mmiri, na Blue Lagoon. Nkume, kpụkọrọ, aja aja, na ugwu mgbawa na-akọwakwa agbata obi Reykjavik.
Maka ihe oriri, ị ga-ahụ ụtọ ịtọ ụtọ ọtụtụ ụdị nri Icelandic ọdịnala na ebe dịka Sushi Samba na Baejarins Beztu Pylsur. Ọ bụrụ na ị hụrụ oke mmiri mmiri, ị nwere ike ịga whale na-elele ọdụ ụgbọ mmiri ochie Reykjavik, ulo gafere 20 ụdị azụ whale dị iche iche. I nwekwara ike ịhụ dolphins, puffins, na porpoises, n'etiti umu anumanu ndi ozo.
4. Inweta Nrọ Europe: Prague, Czech Republic
Ọtụtụ ndị njem nleta hụrụ Prague n'anya maka ihe ịtụnanya dị egwu, site na njem ezumike rue usoro afọ kwa afọ. Fọdụ n'ime ihe omume ndị jupụtara na-atọ ọchị nke ị kwesịrị ịnabata mgbe ị nọ na Prague gụnyere Bohemian Carnevale mgbe ị gara n'obodo ahụ na February, ma ọ bụ Ememe Beer Czech mgbe ị gara ileta na Mee. Ndụ abalị ebe a bụkwa isi ihe mere ndị mmadụ ji aga eleta, na klọb Jazz na ndị ọzọ ndụ music na-achịkwa ntụrụndụ. Ememme Music International nke Prague kwa afọ bụ otu n'ime ihe nkiri ntụrụndụ Prague. Nwere ike ịga nnọkọ abalị niile n'ihi nchebe siri ike na gburugburu obodo. Ọ bụrụ na ị hụrụ nkà na akụkọ ihe mere eme n'anya, ịgagharị na Mucha Museum ma ọ bụ Kafka Museum ga-eme ihe atọ ahụ.
5. Ahụmahụ nrọ nke Europe: Paris, France
Tọn ama ama, ohere ịzụ ahịa na-adịghị agwụ agwụ, a dịgasị iche iche nke na-atọ ụtọ nri, ọgaranya akụkọ ihe mere, na mkpokọta nka, tinyekwara ogige ntụrụndụ na ogige ndị ụwa na-eme ka Paris pụọ iche. Some of the landmarks that you need to see ọ dịkarịa ala otu ugboro n'oge ndụ gị gụnyere Ụlọ Elu Eiffel, Basilica dị nsọ, Arc De Triomphe, Loulọ ngosi Louvre, na Palais Garnier. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi ịzụ ahịa, ị ga-ahụ n'anya n'ubu ya na ezigbo ndị Parisian fashionistas na Rue Du Commerce, Boulevard Saint Germain, na okomoko ndị ọzọ shopping n'okporo ámá. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ nka n'anya, enwere otutu ihe omuma ihe di iche iche gburugburu Paris ka ichota, gụnyere Musee d'Orsay, Musee National Picasso, na Musee du Quai Branly.
Europe bụ mgbe mkpụmkpụ nke "ịwụ ndepụta" obodo na touristy obodo. Ihe niile dabere na mmefu ego gị, oge, na ebumnuche nke nleta. Ndepụta a ga - emepe ụzọ maka gị ịchọpụta ebe ndị kachasị mma na kọntinent ahụ.
ebe a na Chekwa ụgbọ oloko, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere atụmatụ maka njem na 5 Mba Nrọ Na Europe. A ụgbọ okporo ígwè na njem gafee Europe bụ ezigbo njem ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “The European Nrọ: 5 Ga-Gaa Mba Na Europe ”jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperiencing-european-dream-must-visit-countries%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
nrọ	dreamcometrue	EuropeanDream	MustVisitCountriesInEurope	Njem ụgbọala	njem ụgbọ oloko	NjemCzechRepublic	njem France	njem nlegharị anya
Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Luxembourg ụgbọ oloko, Njem Europe
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Zụlite njem Britain, Zụọnụ Travel China, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Italytali